Xiisada Sacuudiga iyo Iran oo aad u kacsan Kadib markii Iran ay si kulul uga Jawaabtay Hadalkii Maxamed Bini Salman | shiniilenews.com
Saturday, November 25th, 2017 | Posted by Shiniile
Taariikh ahaan Sucuudiga ayaa hormuud u ahaa dunida islaamka, balse markii lasoo gaaray sanadkii 1979-kii waxaa dhashay kacaankii islaamiga ahaa ee Iiraan, kaas oo xitaa ay ka go’nayd in ay faafiyaan mad-habka shiiciga ah. Wuxuuna loolan adag la galay hoggaamintii Sucuudiga.
Markii lasoo gaaray sannadkii 2011-kii oo ay dhasheen kacdoonadii shacabka ee Carabta, ayay labadan dal ka faa’iideysteen xaalada qalalaasaha ah ee dalalkaas ka jirtay si ay u faafiyaan saamayntooda.
Sucuudiga ayaa si naf la caarinimo ah isugu dayaya in uu uga hortago qorsheyaasha Iiraan, iyada amiirka da’da yar ee Maxamed Binu Salman uu hormuud ka yahay dadaaladaas.
Dalka Lubnaana, dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in Sucuudiga ay ku cadaadisay Ra’isulwasaarihii dalkaas Sacad Xariiri in uu is casilo.
Sucuudiga wuxuu taageero xoog badan ka haystaa xukuumadda Trump ee Maraykanka iyo waliba Israa’iil oo la sheegay in ay Sucuudiga ku taageersantahay dadaalka in Iran wax laga qabto.
Israa’iil ayaa cabsi weyn ka qabta halista ay ku yeelan karto in maamullo Iiraan dabada ka riixayso sida Suuriya oo kale.
Markii sannadkii 2015-kii Golaha Ammaanka u codeynayeen heshiiskii hubka Nuyuukleerka , Israa’iil iyo Sucuudiga ayaa kasoo horjeedsaday.
Marka si guud loo eego qariidadda Bariga Dhexe waxaa si toos ah loo arki karaa sida la’isu xulufaysanayo suniga iyo shiicada.
Haddii Lubnaan ay wax ka dhacaan waxaa aad suurtogal u ah in Israa’iil ay soo farogaliso , waxayna keeni kartaa dagaalkii saddexaad oo dhexmara Israaiil iyo Lubnaan.